Allgedo.com » 2013 » February » 10
Home » Archive Daily February 10th, 2013
Qaar ka mid Degmooyinka Gobolka Gedo oo dib uga howlgalay dhanka waxbarashada (Dhageyso)
Xaaladaha Waxbarasho ee Qaar ka mid ah dugsiyada Waxbarasho ee ku yaala degmooyinka Gobolka Gedo oo horey ugu xirmay dagaalo yo deganaansho la,aan ka jirtey Gobolka Gedo labadii sano ee ugu dambeeyeyayaa hadda xaalada waxay u muuqataa kuwo ka soo kabanayo dhibaatooyinka xaga Waxbarashada ee ay soo mareen. waxaana dib u howlgaley Dugsiyo waxbarasho ee ku yaala degmooyinka Ceelwaaq, Buusaar iyo Ceelcade...
Maamulka Degmada Afgooye oo Cabasho Xoogan ka muujiyey Isbaarooyin ku soo Badanaya Wadadaasi
Maamulka degmada Afgooye ayaa qaylo dhaan baahsan ka muujiyey Isbaarooyin fara badan oo askarta ka tirsan ciidamada dowlada Soomaaliya ay dhigteen inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye. Gudoomiye kuxigeenka ayaa tilmaamay in Isbaarooyin aad u badan ay yaalaan Siinka dheer ilaa Carbiska kuwaas oo lacago baad ah laga qaado gaadiidka iyo dadweynaha ku safra wadadaas wuxuuna tilmaamay iney marar badan u...
Gudiga Suuqa Bacaadlaha Xamar Weyne oo Digniin u direy Ganacsatada Kireysatay Suuqaasi
Kaddib shirjaraa’id oo ay maanta Magaalada Muqdisho ku qabteen Guddiga dhismaha bacaadlada Degmada Xamarweyne ayaa waxa ay digniin ujeediyeen ganacsatadii kireesatay suuqaasi. Cumar Cismaan Waasuge Guddoomiyaha Guddiga dhismaha Suuqa Bacaadlaha oo warbaahinta ugu horeyn la hadlay ayaa wuxuu sheegay in ganacsatada kireesatay bacaadlaha hadii aysan goobahooda ganacsi ku furan muddo shan cisho gudahooda...
Maamulka Gobolka Bari oo u Hanjabay Siyaasiyiinta ka soo horjeeda Maamulkooda ee ku sugan Puntland.
Masuuliyiinta maamulka Gobalka Bari ayaa ka hadlay ammaanka Magaalada Boosaaso ee Gobalkaasi oo habeen hore uu ka dhacay iska horimaad udhaxeeya kooxo hubaysan iyo ciidanka maamulka Puntland. C/samad Maxamed Galan Guddoomiyaha Gobalka Bari oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay inaysan marnaba udulqaadan doonin falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka ee Boosaaso. Wuxuu sheegay in cid waliba oo dhibaato...
Xildhibaano ka Socda Baarlamaanka Dalka Burundi oo soo Gaarey Magaalada Muqdisho.
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Burundi kuwaasi oo garoonka Muqdisho ay kusoo dhaweeyeen Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanadaan ka yimid dalka Burundi oo tiradooda ay gaaraysa ilaa lix Xildhibaan ayaa ujeedka ay uyimaadeen Magaalada Muqdisho wuxuu yahay inay soo booqdaan markii ugu horeysay. Xildhibaanadan ka tirsan Baarlamaanka...
Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowlada ee Gobolada Jubbooyinka oo ka soo hor jeestey howsha Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka.
Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowlada ee Gobolada Jubbooyinka ayaa waxay sheegeen in xilligani ayan habooneen in Maamul Goboleed loo sameeyo Gobolada Jubbooyinka, iyagoo arintaasina ku sababeeyey wada tashi la’aan iyo Beelaha wada dega Goboladaasi oo u baahan mar hore in loo qabto Dib u heshiisiin. Mid ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowlada ee Gobolada Jubbooyinka oo ka gaabsadey magaciisa...
Golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo Kulan Gaar ah ka leh Arimaha Soomaaliya.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa todobaadka soo socda kulan gaar ah ka leh Arrimaha Soomaaliya, kaasoo looga hadlayo marxaladihii u dambeeyay ee dalka iyo codsigii Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ee ahaa in dib u eegis lagu sameeyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha guud Qaramada Midoobey Augustine Mahiga ayaa sheegay in shirkan lagu falanqeyn...
Qaban Qaabo ku aadan Howsha Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka oo ka socota Magaalada Kismaayo.
Qaban Qaabo ku aadan Howsha Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka oo ka socota Magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka J/hoose ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaayadii ugu dambeeyey ee howsha maamul u sameynta Gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo mudooyinkanba ay qaban qaabadiisu halkaas ka socotay. Shirweynahan oo ay ka qeyb galayaan ergooyin fara badan oo ka kala yimid degaano ka tirsan...
Gaadiidleyda Puntland oo ka Banaanbaxay Sicir Bararka Shidaalka Ka dib Joojintii Shidaalkii ka imaanayey Yamen.
Waxaa maanta ka dhacay magaalada Bosaso shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada gaadiidka wadda iyo kuwa ka ganacsatada shidaalka. Ganacsatadan ayaa isugu jirey kuwa booyadaha, kuwa gaarsiiya gobolada kale, gawaarida xamuulka qaada iyo qaar kale oo badan. Waxay saxaafadda kula hadleen banaanka magaalada Bosaso halkaas oo ay isugu geeyeen dhamaan gawaaridii ay wateen waxaana ay sheegeen in ay ka cabanayaan...